Jeho - Wikipedia
I Jeho dia mpanjakan' i Israely, zanak' i Jôsafata (tsy mpanjaka) sy zafikelin' i Nimsy. Tamin' ny taona 841 hatramin' ny 814 tal. J.K. no nanjakany ka 28 taona ny faharetan' izany. Araka ny Baiboly dia mpitari-tafiky ny mpanjaka Jôrama i Jeho. Tamin' ny faharesena tao amin' ny fanaovam-pahirano an' i Ramôta ao Galaada (na Ramôta-Gileada) izay nampandratra an' i Jôrama dia nitarika ny tafika hanongana an' i Jôrama i Jeho ka namono an' i Jôrama tao Jezrela (na Jezraela) tamin' ny alalan' ny zana-tsipìka natsatoka tao an-damosiny ka nanipy ny fatiny tany an-tsahan' i Nabôta izay novonoin' ny ray aman-drenin' i Jôrama (dia ny mpanjaka Ahaba na Akaba sy i Jezebela na Jezabela) tany aloha. Novonoin' i Jeho koa ireo zanak' i Jôrama sy i Jezebela reniny. Tanteraka noho izany ny faminanian' i Elia ny amin' ny hamalian' Andriamanitra an' i Jezebela sy ny fandimbiasana an' i Jôrama.
Atao hoe יֵהוּא‬ / Yehu izy amin' ny teny hebreo fa Iehu amin' ny teny latina. Ao amin' ny Boky faharoan' ny Mpanjaka no ahitana ny tantarany.
Tantara ao amin' ny BaibolyHanova
Araka ny Baiboly, taorian' ny fanonganam-panjakana nataon' i Jeho tamin' ny fanjakan-taranak' i Ômry dia nohosoran' ny mpianatry ny mpaminany Elisa ho mpanjakan' i Israely izy ka nirahina hanafay ny tranon' i Ahaba (na Akaba) sy hamaly an' i Jezebela (na Jezabela).
Novonoiny ny mpanjaka Jôrama zanak' i Ahaba sy Jezebela ary nalainy ho azy ny fanjakana. Novonoiny koa i Ahazia (Ôkôziasa) mpanjakan' i Jodà izay vavolombelona nanatrika ny famonoana olona nataony. Nampamonoiny i Jezebela sy ny zanaka aman-jafin' i Ahaba miisa 70 ary ireo rahalahin' i Ahazia.
Eo amin' ny lafiny ara-pivavahana dia nofoanany tanteraka ny fivavahana amin' ny andriamanitra Baala izay nampidirin' i Ahaba ka narodany ny tempoliny sady novonoiny ny mpisorony, nefa tsy nahoany ny fanompoam-pivavahana tamin' ny ombilahy kely volamena izay natombok' i Jerôbôama I. Ao amin' ny fitantarana deoterônômista sy taorian' izany izay miendrika faminaniana ao amin' ny Boky faharoan' ny Mpanjaka dia aseho ho mpiaro ny fivavahana amin' i Iahveh i Jeho sy mpiady amin' ny fivavahana amin' i Baala ka manambara izany fa i Iahveh no andriamanitra lehibe indrindra tao Israely tamin' izany fotoana izany.
Amin' ny lafiny ara-tafika kosa dia notafihin' i Hazaela mpanjakan' i Arama-Damasy (na Arama Damaskosy) i Jeho ka nitady fanohanana tamin' i Salmanazara III (na Salmanatsara III) mpanjakan' i Asiria. Mba hahazoany izany fanohanana izany dia nandoa hetra tamin' io mpanjaka io i Jeho nefa tsy ampy hahafaka azy tamin' i Hazaela izany. Azon' i Hazaela ny ampahan-tanin' i Israely tao atsinanan' ny ony Jordana.
Tamin' ny nahafatesany dia nalevina tao Samaria i Jeho ka ny zanany atao hoe Jôahaza (na Jôakaza) no nandimby azy teo amin' ny fitondrana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeho&oldid=1042121"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 13:56
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 13:56 ity pejy ity.